A330 Pack ahee
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #232
Hello! Waxaan soo dejiyey xirmooyinka A330-300-200.
Laakiin waxaa jira VC ah on Turkish Airlines A330-300:
Qofkee ma caawin karaa?
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #233
Waxaa jira laba nooc oo xirmo ah, mid waxaa sameeya POSKY, midna ma laha VC. Mid kale oo ay sameeyeen Thomas Ruth waxay haystaan ​​VC.
Wax walwal ah, haddii wax walba si sax ah loo rakibo, waxaad leedahay labadaba.
Noo sheeg haddii ay jiraan dhibaatooyin kale.
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #235
Kee iyaga ka mid ah nooca POSKY oo ah nooca Thomat Ruth?
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #238
Markaad tagto xulashada diyaaradaha, waxaa jira liisaska liiska 3, ama menus: shirkadda diyaaradaha, daabacaadda iyo nooca diyaaradaha. Guji sawir-qaadaha, dooro Thomas Ruth. Ha walwalin haddii aad aragto Thomas Ruth-Luis Quintero, waa wax la mid ah.
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #239
Ma jiraa a330-300 ama 200 leh kuraasta rakaabka iyo VC?
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #242
Huh ... wax xujo ah oo ku saabsan taas, dhab ahaantii. Sidaan ku idhi, A330 by TR wuxuu la yimid VC, laakiin ma haystaa qolka rakaabka, dhab ahaantii ma garanayo. Waxaan haystaa baako isku mid ah oo la isku rakibay, lakiin ma aanan ka warqabin cabsida, ma aanan raadineynin.
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #243
Laakiin ma jirto A330-300 by thomas ruth waxaa ku jira version cajiib ah, oo waxaad sheegtay in ay ka maqan VC
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #244
OK, marka hore iiga xiriir linkaha diyaaradaha ee aad soo dejisay
Labaad, ma ka timid halkan ama meel kale?
Seddexaad, si sax ah ma loo rakibay?
Tani waa kan aan leeyahay: http: //www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799
iyo hadda, in aan FSX Waxaan haystaa TR A330-300 kor iyo socod. Marka, na sii faafaahin dheeraad ah.
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #245
Dariussssss wuxuu ku qoray: hadda, aniga FSX Waxaan haystaa TR A330-300 kor iyo socod. Marka, na sii faafaahin dheeraad ah.
ok fiican, waxaan ku jiraa lixda F-14, kuwa gacanta kuugu xidhan tan iyo markii lagu dhawaaqay bartilmaameed diirran ..... Waxaa la igu siiyay dabagalka dabka haddii aad samayso hal shil oo qalad ah .....
A330 Pack ahee sano 3 4 bilood ka hor #246
Maxaan khalad sameeyay? Waxaan runtii ku dadaalay inaan ka caawiyo halkaan. Haddii aan sheego ama sameeyo wax qalad ah, waan raaligelinayaa, laakiin runtii uma maleynayo inaan sameeyay.